I-Bebop 2 ene-SkyController -Uvavanyo kunye nazo zonke iinkcukacha ngeSpanish | Iindaba zeGajethi
Sivavanye i-Bebop 2 nge-SkyController
UMiguel Gaton | | Drones, Reviews, Robotics
Namhlanje sikuzisa uhlalutyo lwe bhep 2, Enye yeedrones zeParrot ezibangela ukuba kuthethwe kakhulu kwimarike. Kwakhona, ukwenza ukuba uvavanyo lugqitywe kangangoko kunokwenzeka sinethuba lokuyivavanya kunye neSkyController, okukude okuncamathele kwithebhulethi yakho ukwenza ukuba ukusebenza kweBebop 2 kube lula kwaye kube nomdla njengoko kunokwenzeka.
Into yokuqala ekufuneka uyiqaphele kukuba iBebop 2 ayisiyonto yokudlala. Ngenxa yezibonelelo zayo sinako indawo kuluhlu oluphakathi phakathi kweedrones zobungcali kunye nezo zithengiswa njengezolonwabo nje lwabasebenzisi abancinci endlwini. Ixabiso le-Bebop 2 ene-SkyController ijikeleze i- € 600 kwaye ikhamera yayo iyakuvumela Thatha iividiyo kwisisombululo esipheleleyo se-HD (1920x1080p) kunye nemifanekiso eyi-14 megapixel.
1 Idrone elula ukubhabha
2 Ikhamera yeBebop 2
3 ISkyController, umhlobo olungileyo kwithebhulethi yakho
4 Ukubhabha iBebop 2
5 I-Bebop 2 eneempawu zeSkyController
6 Bebop 2 ividiyo
7 I-Bebop 2 igalari yezithombe
8 Uluvo lomhleli
9 Inzuzo kunye nexabiso
10 Thenga iBebop 2
Idrone elula ukubhabha
Yile nto ibukeka ngayo iBebop 2 ngaphandle
Kulabo bavavanye idrone ngaphambili, IParrot Bebop 2 iya kuba ngumzekelo olula kakhulu wokubhabha. Ukuzinza kwayo ekubhabheni ngokucacileyo kuxhamla ngokuba isixhobo esilula kakhulu esinoyilo oluhambelana kakhulu. Idrone ayinazinto zihambayo zingaphaya kwezihambisi; yonke enye into (kubandakanya nekhamera yayo enamandla) yakhelwe kumzimba ophambili. Ngaphantsi kwemizuzu emi-5 uya kuba sele ulawule ulawulo lweedrone. yakhe hamba kwaye ukufika kuye kugudile kakhulu ke umngcipheko wokonakalisa i-drone ngexesha lokuhamba usezantsi kakhulu.
IParrot yinkampani enamava kuphuhliso lweedrones kwaye ibonisa okuninzi. I-Bebop 2 yenza yonke into elindelwe ngumsebenzisi oqhelekileyo kwidrone kwaye iyenza ngokugqibeleleyoUkubhabha okuzinzileyo, ukurekhodwa komgangatho, iqhosha lokubuyela kwindawo ekude esebenza ngokwenene (into enqabileyo kwizixhobo ezingezizo ezobuchwephesha), ukukhawuleza kwendiza, ukumelana nomoya, ...
Ikhamera yeBebop 2
I-Bebop 2 kunye nekhamera yayo iya kukumangalisa
Njengoko sele siqhubekile kuhlalutyo lwethu, ikhamera yenye yamandla eBebop 2. Inzwa yayo isinika umgangatho weevidiyo I-HD epheleleyo (1920x1080p) kunye ne-14 megapixel yokudubula. Inomfanekiso wokuzinza kunye nokukwazi ukunyuka ukuya kuma-180 degrees. Iimpawu ezintle kakhulu zohlobo lwesixhobo esisihlalutyo kodwa ezingonelanga ngokwanele ekusebenziseni ngobuchule idrone.
Uyilo lwayo oludityaniswe emzimbeni we-drone lunceda ukubonelela ngozinzo olukhulu, i-aerodynamics kwaye kuthintela abaqhubi ukuba bangene endleleni xa bethatha iifoto okanye iividiyo ngaphandle kwabo i-angle ebanzi.
ISkyController, umhlobo olungileyo kwithebhulethi yakho
I-Bebop 2 yenzelwe ukuba ilingwe kwithebhulethi okanye kwi-smartphone ngokusebenzisa iFreeFlight 3 yesicelo, kodwa ngenene kunye ne-Skycontroller xa uza kuba nakho ukuyazi idrone ngobushushu obupheleleyo. I-Skycontroller iqhagamshela nge-Wi-Fi kunye nethebhulethi yakho kwaye ikuvumela ukuba ulawule idrone ngakwindawo ekude ebonakalayo. Ukongeza (kwaye eli ingongoma ebaluleke kakhulu) iyakwandisa umqondiso we-Wi-Fi wethebhulethi ukuze Uluhlu lweempawu luhamba malunga neemitha ezingama-250 ukuya phantse kwiikhilomitha ezi-2Logama nje singenayo nayiphi na imiqobo phakathi kwesilawuli kunye nedrone. Nge-Skycontroller uya kuziva ngathi ungumqhubi wenqwelomoya okwazi ukubhabha i-drone yakho de uyilibale ngelixa Uyiphatha ngokuzolileyo ngombono womntu wokuqala onikezelwa siscreen sethebhulethi.
Ukubhabha iBebop 2
Ukuqala ukuqhuba i-Bebop 2 ilula kakhulu. Kufuneka sivule iSkycontroller kunye nedrone, qhagamshela i-wifi yethebhulethi kunye ne-Skycontroller, qalisa usetyenziso lweFreeFlight 3 kwaye sikulungele. Ukususela kuloo mzuzu Iscreen sethebhulethi yakho siza kukubonisa ngexesha lokwenyani umbono othathwe yidrone kunye nolwazi ngesantya sendiza, ukuphakama, umgama phakathi kwedrone kunye nolawulo, njl. Ukuthatha iifoto okanye ukurekhoda ividiyo yimisebenzi elula njengokucofa iqhosha elilula kwaye ngejostick ebekwe kulawulo olululo unokuhambisa ikhamera ukuya kuthi ga kwiidigri ezili-180 ukubamba yonke into oyifunayo.
La Ukuzimela kweBebop 2 malunga nemizuzu engama-20 Enkosi ngokuphucula ibhetri ye-2.700 mAh Li-ion. Ukongeza, iremote isebenzisa uhlobo olufanayo lwebhetri, ke xa kusetyenziswa ibhetri yedrone ungabatshintshisa Ngokusengqiqweni, awunyanzelekanga ukuba ukhuphele ibhetri ye-drone eyi-100 %- kwaye ukonwabele ukubhabha kwesibini kweminye imizuzu engama-20, kuba okukude kudla phantse akukho bhetri xa kuthelekiswa nedrone.
I-Bebop 2 eneempawu zeSkyController
I-Bebop 2 ene-SkyController
Rotors «Iirotors ezine Iibhleyidi ezintathu kumqhubi ngamnye omalunga neesentimitha ezi-5 ububanzi »
Isantya esisezantsi esithe tyaba 60 km / h
Uluhlu lweempawu Iimitha ezingama-250 (ngaphandle kweSkyController)
Uluhlu lweempawu Iikhilomitha ezi-2 (kunye neSkyController)
Ukuzimela malunga nemizuzu engama-20
Ibhetri I-2.700 mAh Li-ion
Imemori yangaphakathi I-8GB yememori yangaphakathi ifikeleleka nge-microUSB okanye ngokungqamanisa iBebop 2 kunye nethebhulethi ngeFreeFlight 3
Ikhamera «I megapixels ezili-14 rekhoda ividiyo ukurekhoda ividiyo kwifomathi epheleleyo ye-HD (1920x1080p) »
Iimpawu zekhamera ezongezelelweyo «Ukuzinza komfanekiso inkqubo anti-ukungcangcazela Ukutshintsha kwezidanga nge-180
Ubukhulu 38'2 x 38'2 cm
Ubunzima (Bebop 2) I-500 gram
Iindlela zokulinga I-smarpthone okanye ithebhulethi (i-iOS / i-Android) kunye nomlawuli we-SkyController
Bebop 2 ividiyo
Ukuze ungalahleki yonke into esinokuyifumana kule modeli, nantsi ividiyo apho unokubona khona iBebop 2 ene-SkyController ekude isebenze ngokupheleleyo.
I-Bebop 2 igalari yezithombe
Yonwabela igalari yeefoto yonke yesi sixhobo sikhulu seParrot.
Kulula kakhulu ukuqhuba
Uluhlu lweradiyo xa ufaka iSkyController
Thenga iBebop 2
Okwangoku olona khetho lufanelekileyo lokuthenga i-Bebop 2 yile pack apho uya kuba nayo I-Bebop 2, i-SkyController 2 kunye ne-FPV goggles ze- € 699 kuphela kwivenkile yaseJuguetronica. Indawo ekude esivavanye kolu hlaziyo yimodeli edlulileyo, ke ngoku kuyacetyiswa ukuba uthenge iSkyController entsha ezisa uphuculo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sivavanye i-Bebop 2 nge-SkyController
I-China ibhengeza ukuba ilahlekile kulawulo lwesikhululo sayo kwaye iya kuwela eMhlabeni ngo-2017
Khuphela iAllo ngoku, usetyenziso olutsha lwemiyalezo kuGoogle ngoncedo olubonakalayo kunye nokunye okuninzi